ပြိုင်ဘက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံသားကို အနိုင်ယူ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန် ရဲ့တပည့် တီရယ်ထန်း ( ဗီဒီယို ) - Lucky9
Homepage / နာမည္ၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား / ပြိုင်ဘက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံသားကို အနိုင်ယူ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန် ရဲ့တပည့် တီရယ်ထန်း ( ဗီဒီယို )
ပြိုင်ဘက်ကိုးရီးယား နိုင်ငံသားကို အနိုင်ယူ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန် ရဲ့တပည့် တီရယ်ထန်း ( ဗီဒီယို )
ယနေ့မှာတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ One Champion က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ “ Mark of Greatness” ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ နိုင်ငံစုံက MMA ကစားသမားတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်….မြန်မာနိုင်ငံက တီရယ်ထန်းဟာ လည်း မြန်မာကိုယ်စားပြုပြီး အဆိုပါပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ထိုးသတ်ခဲ့ပါတယ်….
အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ သင်ကြားပေးမှုတွေနဲ့ တီရယ်ထန်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာပါ……..တီရယ်ထန်းဟာ ယနေ့ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဝန်ချွမ်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပြီး ထိုက်တန်စွာ အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေ ဂုဏ်ယူခဲ့ရပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ပွဲအပြီးမှာ တီရယ်ထန်း ပြောတဲ့ စကားတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက ပိုပြီး အံ့သြခဲ့ကြကာ တီရယ်ထန်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်….အဲတာကတော့ တီရယ်ထန်းဟာ ကင်ဝန်ချွမ်းနဲ့ မထိုးသတ်ခင်ကတည်းက နံရိုးကျိုးဒဏ်ရာ ရရှိထားခဲ့တယ်လို့ တီရယ်ထန်းက ပွဲအပြီးမှာ ဖွင့်ဟ ပြောကြားခဲ့တာပါ….ဒီဒဏ်ရာကို လေ့ကျင့်ရင်း ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ပွဲဖျက်လိုက်ဖို့အထိ စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ တီရယ်ထန်းက ဆိုပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ အောင်လအန်ဆန်က အချိန်ကြာကြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးမှ လွဲချော်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့် ဒီပွဲကို ဆက်ထိုးဖို့ ခွန်အားတွေရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ တီရယ်ထန်း က ဆိုခဲ့ပါတယ်…ချင်းတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တီရယ်ထန်းကတော့ အောင်လရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ အတူ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကြားက ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပြီး ခုလို ပြိုင်ဘက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကို အနိုင်ရရှိပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့ကြောင့် နံရိုးကျိုးနေတာတောင် သတ္တိရှိရှိ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တီရယ်ထန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး အားပေးဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေ ပြောကြားပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…
Credit – HW (Shwe Yaung Lan) , Video Source : Popolay, Photo News: HlwanMoeAung(DVB Sports)
Previous post အာ႐ွအဆင့္ အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႔ဆုကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွာရရိွခဲ့တဲ့ ျပည့္ျပည့္
Next post မြန်မာ့သနပ်ခါးတွေ ထင်း အစားထိုး အသုံးပြုနေရလောက်အောင် ဖြစ်နေပြီ